Scrum မာစတာလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရဖို့ 10 အကြောင်းရင်းများ
ပွင့်လင်း Menu ကို
window ဆာဗာ 2016
Dynamics ကို 365
ITIL Foundation က
ITIL ဝန်ဆောင်မှုမဟာဗျူဟာ (SS)
ITIL ဝန်ဆောင်မှုဒီဇိုင်း (SD)
ITIL Service ကိုအကူးအပြောင်း (ST)
ITIL Service ကိုစစ်ဆင်ရေး (SO)
ITIL အလယ်အလတ် CSI
ITIL အလယ်အလတ် PPO
ITIL အလယ်အလတ် RCV
ITIL အလယ်အလတ် SOA
ITIL တဲ့ Expert (MALC)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကွန်ယက် Defender (CND)
ECSA v10 (EC-Council မှလက်မှတ်ရလုံခြုံရေး Analyst,)
EC-Council မှလက်မှတ်ရလုံခြုံတဲ့ Programmer (ECSP.net)
Computer ကို Hack တဲ့, ဥပဒေရေးရာသုတေသန (CHFI)
EC-Council မှဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Professional က (EDRP)
EC-Council မှလက်မှတ်ရလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူ (ECSS)
EC-Council မှလက်မှတ်ရဆူပူမှု handler (ECIH)
EC-Council မှလက်မှတ်ရလျှို့ဝှက်ကုဒ်အထူးကု (ECES)
EC-Council မှရဲ့လက်မှတ်ရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် (ကို C | CISO)
EC-Council မှလက်မှတ်လုံခြုံတဲ့ Programmer (ဂျာဗား)
612 အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဥပဒေရေးရာတွေကတော့နှင့်လုံခြုံရေး Cast
613 Hacking နှင့်ခိုင်မာစေကော်ပိုရိတ်က Web App ကို / ဝကျဘျဆို Cast
614 အဆင့်မြင့်ကွန်ယက်ကာကွယ်ရေး Cast
616 Securities သည် Windows အခြေခံအဆောက်အအုံ Cast
BlueCat လုံခြုံရေးနှင့် Advanced Configuration
ArcSight ESM 6.9 အဆင့်မြင့် Analyst,
ArcSight Logger မှအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေး
HP က ArcSight ESM 6.9 လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပွိုင့်လက်မှတ်လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး R80 Check
ပွိုင့်လက်မှတ်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူ (CCSE) Check
Cyberoam လက်မှတ်ကွန်ယက် & Security Expert
Cyberoam လက်မှတ်ကွန်ယက် & လုံခြုံရေး Professional က (CCNSP)
Trend Micro နဲ့
Trend Micro နဲ့နက်ရှိုင်းသော Discovery
Trend Micro နဲ့နက်ရှိုင်းသောလုံခြုံရေး Scan ကို
Trend Micro နဲ့ရုံး Scan ကို
ထရီ AP-Data အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသင်တန်း
ထရီ PA ဆိုပြီးကို EMAIL အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသင်တန်း
FortiGate II ကို
မာစတာသင်တန်းပေး & စည်းရုံးရေးမှူးများ (MTF)
အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ရေးနည်းပညာ (CATT) ရက်နေ့တွင်လက်မှတ်
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Psychometric စမ်းသပ်ခြင်း Professional က (CPTP)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည် & ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရေးသားသူ (CPCD)
HR Analytics မှခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရ Professional က (Champs)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးရေး Analyst, (coda)
လက်မှတ်ထမ်းခေါ်ယူမှု Analyst, (CRA)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း OD ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး Professional က (CODIP)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Balance ရမှတ် Card ကို Professional က (CBSCP)
လက်မှတ်ရအလုပ်အမှုဆောင် & ဘဝကနည်းပြ (CELC)
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း HR စီးပွားရေးမိတ်ဖက် (CHRBP)
လက်မှတ်ရသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ Manager ကို (CLDM)
Mongo အဘိဓါန် DB
HP က Software များ Automation စမ်းသပ်ခြင်း
HP က ALM
Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ)
HP က Tipping Point သို့
AWS သင်တန်းအပေါ် Architecting
AWS နည်းပညာဆိုင်ရာ Essentials သင်တန်း
ACI Mode ကို v9000 အတွက် Configuring Cisco က Nexus 2.0 switch
NX-OS ကို Mode ကို (C9000KNX) အတွက် Cisco က Nexus9Configuring
ပရိုဂရမ်များအတွက် R ကိုမိတ်ဆက်
28 မာ 2018
အားဖြင့် PostedRishi Mishra
1 ။ Scrum အချက်အလက်များ၏အားကြီးသောအခြေစိုက်စခန်း Get
2 ။ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းနည်း
3 ။ သငျသညျဆိုင်တဲ့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲလိမ့်မယ်
4 ။ Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်သင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့အကျိုး
5 ။ တစ်ခုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်လက်ခံရန်သင့်အသင်းအဖွဲ့သြဇာလွှမ်းမိုး
6 ။ သင့်ရဲ့ရွယ်တူတွေနဲ့ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်
7 ။ သင့်ရဲ့အလယ်ဗဟို Scrum သတင်းအချက်အလက်ရွယ်တူချင်းမှသရုပ်ပြ
8 ။ scrum ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Join
9 ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလုပ်သားများနှင့်အတူဝင်းစီမံကိန်းများကို
10 ။ လေးစားမှုတစ်ဦးကသင်္ကေတ
လက်မှတ်ရ Scrum မာစတာဖြစ်လာဖို့အချိန်
တစ်ဦး Scrum မာစတာဖြစ်လာ
Scrum ရှုပ်ထွေးစီမံကိန်းများကိုကျော် crosswise ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အပြန်အလှန်စာပေးစာယူနဲ့မြန်နှုန်း accentuates တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထဲကမှ Self-မျိုးအုပ်စုများဖွနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အခြေခံမူများနှင့်အညီ, လျှင်မြန်စွာတိုးတက်မှုထွက်လှိမ့်။
ဒါဟာရောနှောအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးကျော်အသုံးပြုသွားမည်သောထင်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ရဲ့; Spotify, Microsoft နှင့် Ericsson ကများကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး Scrum အသုံးချရန်။ မည်သို့ပင်သင် Scrum အသစ်ပါပဲ, ဒါမှမဟုတ်ယခုတစ်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ရှိမရှိ၏, ဒီမှာ Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်၏ 10 အားသာချက်များရှိပါသည်:
Scrum သင်ယူမှုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အခြေစိုက်စခန်း Get
သင့်ရဲ့အလယ်ဗဟို Scrum သတင်းအချက်အလက်ရွယ်တူချင်းမှသရုပ်ပြ
scrum ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Join
5,400 ၏ပိုလျှံထဲမှာတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးအိုင်တီရှာဖွေတွေ့ရှိအသုံးစရိတ်အစီအစဉ်ကို overspend မကြာခဏကျူးကျော်တာဝန်၏အလငျး၌ 45% ရရှိမှန်းချက်ရဲ့။ Scrum အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးသို့လှည့်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ကွာ, ဤမလုံလောက်မှုနေနှင့်ထိထိရောက်ရောက်နှင့်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏စီမံကိန်းများပြီးသွား၏ရိုက်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
Scrum မာစတာသင်တန်းများနှင့်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းလက်လှမ်းဖြစ်ကြသေးအချို့အဘို့, အားသာချက်များကိုချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ ၏အားသာချက်များကိုရှာဖွေအပေါ် Read Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်.
သငျသညျ Scrum ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်လက်မှတ်ပြီးမြောက်သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာကလျှောက်ထားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်စွမ်းရည်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အသင်း Scrum နည်းစနစ် execute မှစတင်ခဲ့သည်နှငျ့သငျထ aptitude ရန်ရှိသည်, ထို Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်သတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်လိမ့်မယ်ပွီးမွောကျကွောငျးကိုချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ။
ထိထိရောက်ရောက် Scrum နှင့်အတူကြုံတွေ့? အဆိုပါ Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်ပြီးမြောက်သင်သည်သင်၏ Scrum သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာရှိစေခြင်းငှါမဆိုပေါက်တွေဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာမေးပွဲမှ Scrum ၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးသုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်, ဆင်ခြင်၏။
Scrum အနေနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ် viably ကအသုံးချနိုင်ဖို့သင်တစ်ဦးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စိတ်ဓာတ်သို့ရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ self-စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသီးအနှံများခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ချဉ်းကပ်မှု၏အများဆုံးအရေးပါသောအဒြပ်စင်တစ်ခုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စိတ်ဓာတ်နှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဘို့ဤသဘောထားကို imbue ပါလိမ့်မယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဲ့သို့သင်တို့လျော့နည်းတဲ့ဝိရောဓိ, ပိုကောင်းတဲ့အုပ်စုတစုကို attachment နဲ့ပိုပြီးအသီးအနှံများစီမံကိန်းများကိုချက်ချင်းအနေနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအတွက်စဉ်းစားရန်စွမ်းရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အလေ့အကျင့်အသုံးချဆိုအသင်းအဖွဲ့ကျော်သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဖွင့်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ လက်မှတ်ဒါ့အပြင်သင်တို့သည်ဤအလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုတစ်ဦးချင်းစီအသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့သဘောထားနှင့်သွက်လက်သင်ယူမှုတစ်ခုကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ရှိသည်ကြောင်းပြသသည်။
လူများ, ဖြစ်စဉ်များ, client နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု: ကတပြင်လုံးကိုအသင်းအဖွဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးကတည်းကအခြားနည်းစနစ်လက်ခံမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဧရာရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤအလိုင်းများတလျှောက်တွင်, သင်လျှင်မြန်စွာအချို့စစ်မှန်သောနှင့်သိသိသာသာအားသာချက်များကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်ကိုအားလုံးသက်ဆိုင်သူများများအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ unsurprising နှင့်ပြန်လုပ်ဥတုအစီအစဉ်များ, Self-ကြီးကြပ်အုပ်စုများနှင့်အတူ Scrum အမှန်တကယ်ဤအမှု၌လင်းလက်နေတဲ့။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Scrum သင်ယူမှုတစ်ခုမရှိခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်သောအလားအလာရလဒ်များလိုက်လျောနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်မှတ်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသင်ယူမှုမပါဘဲသင်သည်သင်၏အသင်းအဖွဲ့အထဲမှာမြေပြင်ကိုချွတ် Scrum ရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဝင်းဒိုးကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါ, ထိုလက်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ယခုသူတို့တွင်၏အဖြစ်သရုပ်ပြခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကရှိပါတယ်လျှင်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ် Scrum နည်းစနစ်သို့ပိုပြီးကောင်းသောချပြီးအရင်းအမြစ်များကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်သင် Scrum နည်းစနစ် actualize ဖို့ပြင်ဆင်ထားနေစီမံခန့်ခွဲမှုပြသသည်။
အဆိုပါ Scrum မာစတာအောင်လက်မှတ်သင့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူတစ်ဦးအကျိုးရှိသောရလဒ်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူသင်သည်သင်၏အထူးစီးပှားရေးလုပျငနျးမှ scrum ပစ္စည်းအလားတူဝေါဟာရနှင့်အခြေခံ comprehension လီဆယ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်လိုသောလိမ့်မယ်သူတို့နှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည် Get ။
မည်သို့ပင်သင်အဘယ်အကျိုးကိုရလိမ့်မယ်အရာရာရှိနေသော်လည်း, သင့်အပေါင်းအသင်းအဖြစ်အလားတူ Scrum သင်တန်းယူကြဘူးရှိမရှိ၏။ တစ်ခုချင်းစီကို Scrum ပညာပေးသူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်၏စတိုင်လ်များနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်နားလည်သဘောပေါက်အတွက်ပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Scrum အမျိုးမျိုးအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပေမည်။
နောက်ဆုံးမှာ, သငျသညျ Scrum နှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုထက်ပိုသောပြောင်းလဲ comprehension အဘို့သင့်ထိုးထွင်းသိမြင်စုပေါင်းပြီးဖို့စွမ်းရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Scrum မာစတာလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်ခေတ္တခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပြီကြောင်းကိုသင်၏ရွယ်တူချင်းမှပြသ, Scrum စဉ်းစားနှင့်သင့်အသင်းအဖွဲ့အတွင်းပိုင်းကလျှောက်ထားရန်သင်ယူခဲ့တယ်။
သင်ကသရုပ်ပြဖို့အတွက်လက်မှတ်ရှိသည် - သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိအပေါင်းအသင်းဆွဲဆောင် idly န်းကျင်ထိုင်ရန်မဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုရဖို့သေချာ Scrum မာစတာသို့လှည့်နှင့်သင် ceaseless ပြောင်းလဲမှုနှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရိပ်မိ Scrum ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။
Scrum.org Scrum ပညာရှင်များနှင့်နည်းပြတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း system ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤသည်ပြောင်းလဲနေသောအုပ်စုတစ်စုကိုရှာဖွေ (နှင့်ပေး) အချက်အလက်များ၏စာကြည့်တိုက်, အခါသမယရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုနှင့်နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ဖြည်ဦးတည်ချက်။
သငျသညျစီမံကိန်းများကိုအနိုင်ရဆန့်ကျင်ဘက်သောဖြစ်ရပ်မှာတော့အတည်ပြု Scrum မာစတာ၏အုပ်စုတစုဟာကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့အလားအလာ clients များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အစွမ်းထက်လမ်းအတွက် Scrum လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အုပ်စုတစ်စု၏ခန့်မှန်းချက်ရိပ်မိပါလိမ့်မယ်။
လက်မှတ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ခံရဖို့်၏လေးစားမှုသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, သင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နေအမှု၌, သင်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များပြင်ဆင်အတည်ပြုရတဲ့သူတို့ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အကျိုးတူနှင့်အသိတာဝန်၏ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏သစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်လျှောက်ထားဖို့ပိုသင်ယူန်ထမ်းများစိုးရိမ်ပူပန်ရလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအခွခေံမူ "သင်ကသူတို့ကိုပြင်ဆင်နေ, တစ်စုံတစ်ယောက်များဝယ်ယူရန်သူတို့ကိုစွန့်ခွာဘဲအကုန်အကျဖြစ်ပါသည်, ထိုသူတို့ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုဆက်လက်တည်ရှိလျက်သူတို့ကိုမစာချုပ်ချုပ်မှာထိုးနှက်မှုတစ်ခုယူပါ။ ထင်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်" ဝင်အဖြစ်
တစ်ဦးဖြစ်လာ Professional က Scrum မာစတာ သာ 2-နေ့ရက်ကာလ၌ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအပေါ်ဖြေရှင်းချက်ရဲ့သင်တန်းအသက်ရှင်။ သငျသညျကို double အမြန်နှုန်းမှာ ပြင်ဆင်. ပြင်ဆင်မှုများကြားတွင်သင့်ရဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုထိုင်ပါ့မယ် - Scrum စွမ်းရည်အမြန်လိုအပျကွောငျးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အုပ်စုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
ရုံ2နေ့ရက်များအတွက်
Scrum - တစ်စကေးအခမဲ့ဒီဇိုင်း
Scrum vs. PRINCE2 အကြားနှိုင်းယှဉ်
အပေါ် Posted18 စက်တင်ဘာ 2018
အပေါ် Posted17 စက်တင်ဘာ 2018
GDPR ဖို့နိဒါန်း: အဆိုပါအဘယ်သူသည်အဘယ်သို့လျှင်, အဘယ်ကြောင့်များနှင့်အဘယ်မှာရှိ GDPR ၏
အပေါ် Posted23 သြဂုတ် 2018
အပေါ် Posted03 သြဂုတ် 2018
ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး & အဘယ်ကြောင့် ITIL ၏အကျိုးကျေးဇူးများလိုအပ်သလဲ?
အပေါ် Posted10 ဇူလိုင်လ 2018
Microsoft က Dynamics ကို 365 နားလည်ခြင်း
အပေါ် Posted22 ဇွန် 2018
အပေါ် Posted19 ဇွန် 2018
DevOps - အနာဂတ်အိုင်တီ၏ Industries,
အပေါ် Posted15 ဇွန် 2018
CCNA ကိုဘယ်လိုအရေးကြီးလဲ? ကျွန်တော် CCNA နဲ့ပတျသကျတဲ့အဘယ်အရာကိုသိသင့်သနည်း
အပေါ် Posted14 ဇွန် 2018
အပေါ် Posted13 ဇွန် 2018
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions အိုင်တီနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်, တစ်ဦးချင်းစီကော်ပိုရိတ်များနှင့်ကောလိပ်များမှလေ့ကျင့်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အိန္ဒိယအားလုံးကော်ပိုရေးရှင်းအချက်အချာအတွက်ရရှိနိုင်ပါလေ့ကျင့်ရေးခန်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းပေးတာအပြင်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အသုံးဝင်သော Links များ
လက်မှတမျှော်စင်အနီး B ကို 100 တစ်ဦး, တောင်မြို့ 1,, Gurgaon, HR, အိႏၵိယ - 122001
မူပိုင်ခွင့်© 2017 - All Rights Reserved - ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ Solutions | ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ.